Pane nyaya inonetsa mumusha medu ndeyekuti wawacha uye kwakabva chirevo chekuti wawacha kana kuwachiswa. Nyaya yakauya nekuti varume vekare vaisawacha hanzu dzevana.
Kana murume akawanikwa achiwacha hanzu dzevana aibva anzi wakafuratidzwa moyo kana kuti wakadyiwa. Nyaya iyoyo yaibva yakura zvokusvika pakusekwa navamwe varume nehama. Imwe nguva kutosvika pakunzi unofanirwa kurutsiswa kun'anga kana kuenda kuenda kuvaporofita apo vakazenge vauyawo. Nyaya iyoyi iri kunetsa kana nanhasi uno.